जहाज थपेर उडान विस्तार गर्ने तयारीमा यती एयरलाइन्स | Artha News Nepal
Home	पर्यटन	जहाज थपेर उडान विस्तार गर्ने तयारीमा यती एयरलाइन्स
जहाज थपेर उडान विस्तार गर्ने तयारीमा यती एयरलाइन्स
काठमाडौं – यती एयरलाइन्सले जहाज थपेर उडान विस्तार गर्ने योजनामा जुटेको छ । यतीले आन्तरिक उडानमा थप नयाँ एटिआर–७२ जहाज भित्र्याएर गन्तव्यका साथै उडान संख्या बढाउने भएको हो । यतीको एटिआर जहाज सम्भवतः यही महीनाभित्र काठमाडौं आइपुग्नेछ । यो सहित यतीसँग ६ थान एटिआर जहाज हुनेछन् ।
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीपछि खुलेको आन्तरिक उडानमा यतीले तीन एटिआर जहाजमार्फत आन्तरिक उडान गरिरहेको थियो । आगामी मार्चदेखि यतीले हाल भएका पाँचओटै एटिआर जहाज उडाउनेछ । थपिएको एटिआरले पनि छिट्टै उडान गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
जहाज थपिएपछि मार्च महीनाबाट पूर्ण क्षमताका साथ आन्तरिक उडान हुने यती एयरलाइन्सका हवाई सुरक्षा विभाग प्रमुख एवम् प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिए । यतीले हाल नौ गन्तव्यमा उडान गर्दै आएको छ ।
प्रेमदिवस ‘भ्यलेन्टाइन डे’ फेब्रुअरी १४ लाई मध्यनजर गर्दै यती एयरलाइन्सले पर्वतीय उडान ‘माउन्टेन फ्लाइट’ मा विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । पर्वतीय उडानमा जाने यात्रुलाई विमानस्थलदेखि घरसम्म बससेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
टिकट भने पुरानै मूल्य अथार्त रू. आठ हजार ८४८ तोकिएको छ । अफर अन्तर्गत पर्वतीय उडानका यात्रुलाई प्रेम उपहारका साथै आठ जिबी डेटा तथा रू. एक हजार क्यास बराबरको स्मार्ट टेलिकमको सीमकार्ड दिइनेछ ।
आन्तरिक उडानमा बजार विस्तारको रणनीतिका साथ अघि बढेको यतीले छिट्टै पोखरा–सिमरा उडान गर्ने भएको छ । व्यापारिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा उडान विस्तारको योजना बनाएको यतीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ ।
पोखराका पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग यतीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सहितका पदाधिकारीले यसै साताभित्र अन्तिम छलफल गरी उडान निर्णय लिइने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
यतीले पोखराबाट भैरहवा र भरतपुर उडान गर्दै आएको भए पनि कोभिड महामारीका कारण अहिले उडान स्थगित गरिएको छ । उक्त उडान पनि छिट्टै सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ ।
यतीले हाल १४ गन्तव्यमा उडान गर्दै आएको छ । कोभिड महामारीकैबीच गत असोज ५ देखि आन्तरिक उडान शुरु भएको थियो । यसअघि भदौ १६ बाटै अन्तरराष्ट्रिय उडान भएको थियो ।
उडान विस्तारजहाजयती एयरलाइन्स